Buug ka Hadlaya khatarta Tahriibka oo lagu soo Bandhigay Garowe – Radio Daljir
Seteembar 10, 2015 6:18 b 0
Khamiis, September 10, 2015 (Daljir) — Xarunta Jaamacadda PSU ee magaalada Garoowe ayaa maanta waxaa lagu soo bandhigay buug cusub oo lagu magacaabo Jidkii Rajada oo kahadlaaya Khatarta Tahriibka iyo dhammaan dhacdooyinka xun-xun ee ay lakulmaan dadka Tahriiba.
Munaasabaddii bandhiga buugaan ayaa waxaa ka qaybgalay madax kasocota dowladda Puntland, xildhibaano katirsan golaha deegaanka degmada Garoowe, qorayaal reer Puntland ah, dhalinyarada magaalada Garoowe iyo qaybaha kale ee bulshada caasimadda.
Ugu horayn Suhuur Xaashi Maxamed oo kamid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada Garoowe iyo qabanqaabiyaashii bandhiga buugaan cusub ayaa sheegtay in buugaan uu xambaarsan yahay macluumaad badan uu muhiim u ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanka ku haysa tahriibka.
Xildhibaan Suhuur ayaa ku boorisey dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka inay ka fogaadaan tahriinka ayna dalkooda aaminaan, waxaana ay sheegtay in dalka hooyo uu ka wanaagsan yahay meelkasto oo lagu noolaado.
Sahra Axmed Kooshin oo kamid ah bahda qorayaasha gabdhaha qalinleeyda ee Puntland ayaa dhankeeda ku dheeraatay muhiimadda qoraalka iyo sida ay muhiimka u tahay in dhalinyarada Soomaaliyiyeed ay hoos u fiiriyaan fursadaha dalkooda.
Gudoomiye Kuxigeenkii hore ee degmada Galkacyo Yacquub Maxamed Cabdalle oo kamid ahaa dadkii lagu casuumey bandhiga ayaa sheegay in qoraalku kamid yahay tiirarka ugu muhiimsan ee ka qaybqaata koritaanka maskaxda bini’aadamka.
Ugu dmabayntiina waxaa soo xiray munaasabadda agaasimaha guud ee dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland Axmed Cabdalle Tigaana, wuxuuna sheegay in dalka hooyo yahay lama huraan, isagoona sheegay in fekerka kasta oo kayimaada dhalinyarada Puntland ay soo dhoweyn doonaan.
Qaban-qaabada Xafladda Caleema Saarka Madaxweyne Madoobe oo ka socota Kismaayo